လက်တွဲဖော်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာရန်ပြေငြိမ်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)ခု - For her Myanmar
လက်တွဲဖော်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာရန်ပြေငြိမ်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)ခု
ဘဝလက်တွဲဖော်ရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ နှစ်ယောက်သား စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာတွေ၊ ဘုနဲ့ဘောက်ဖြစ်တာတွေက သဘာဝပါပဲ။ ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့တောင် အဆင်မပြေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိသေးတာ သွေးမတော်သားမစပ်တဲ့ လူနှစ်ယောက်ဆို ပြောဖွယ်မရှိပေါ့။ ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းတာသာ မလုပ်မိရင် အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ရုံပဲ ရှိမယ်ယောင်းရယ်။ ခက်တာက သွေးပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့အချိန်ဆို ဖြေရှင်းနည်းက အလွယ်တကူခေါင်းထဲရောက်မလာတာပဲ။ ဒီတော့ လက်တွဲဖော်နဲ့ ပြဿနာအစပျိုးလာပြီဆိုရင် …
ဟုတ်ပါတယ် ယောင်းရေ … အရင်ဆုံး နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဝစီဗေဒထိတိုင်းရှတဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချေအတင်ခွန်းကြီးခွန်းငယ်ပြောရင် ပိုဆိုးရုံပဲရှိတာပါ။ စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လက်တွဲဖော်ကို လျှာစောင်းထက်ထက်နဲ့ ပြောခဲ့သမျှတွေက ယောင်းတို့အိမ်ထောင်ရေးကို အထိခိုက်စေဆုံးမို့ ပြဿနာဖြစ်ရင် စိတ်အေးသွားတဲ့အချိန်ထိ နှုတ်ဆိတ်ပြီး ခဏရှောင်နေလိုက်ပါ။
Stella တို့တွေက ပြောဖို့ပဲအားသန်ကြပြီး သူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်တွေကို နားထောင်ပေးဖို့ မေ့လျော့နေတဲ့အထိ အတ္တကြီးတတ်ကြတယ်။ ဒါတွေကပဲ အနားက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လူတချို့ကို ဆုံးရှုံးနေစေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပါ။ အလုအယက်ပြောပြီး ကိုယ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ ကြိုးစားနေမယ့်အစား သူ့ဘက်ကကော ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတာ နားထောင်ပေးသင့်ပါတယ်။
တစ်အိုးတစ်အိမ်တည်ထောင်ပြီဆိုတာနဲ့ လူနှစ်ယောက်က တစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်းဖြစ်နေပြီလေ။ ဆိုးတူကောင်းဖက် ဘာမဆိုမျှဝေခံစားဖို့ ကတိပြုခဲ့ပြီးပြီပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ဖက်သားမှာကော ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေလဲ၊ နိစ္စဓူဝကိစ္စအထွေထွေ အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတာတွေကို မသိရင်တောင် သိအောင်ကြိုးစားပါ။
ဘုံရန်သူဆိုတာ တခြားမဟုတ်ဘူး။ ယောင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာပါပဲ။ ပြဿနာကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားဘဲ သူ့ထက်ငါအနိုင်ရရေး တို့အရေးဖြစ်နေရင်တော့ အဆုံးသတ်လှမယ် မထင်ပါဘူး။
ယောင်းဘက်က မှန်ရင်လည်း မှန်နေနိုင်တယ်။ အနိုင်ရသူက ယောင်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အနိုင်ရတော့ကော ဘာထူးလဲ ? အနာဂတ်မှာလည်း ဒီလိုပြဿနာတွေ ဖြစ်လာဦးမှာပဲ။ ခေါင်းထဲမှာ အနိုင်ရဖို့ပဲ ရှိနေမယ်ဆိုရင် အချိန်ယူတည်ဆောက်ထားရတဲ့ relationship တစ်ခုကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့က သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သော့ချက်ပါပဲ။
ကဲ … ယောင်းရေ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းလည်း လက်တွဲဖော်နဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံလာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရသွားလောက်ပါပြီ။ ချစ်တဲ့သူအားလုံး လက်တွဲညီညီ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေနော်။
ဘဝလကျတှဲဖျောရယျလို့ ဖွဈလာပွီးတဲ့နောကျမှာ နှဈယောကျသား စိတျသဘောထားခငျြး မတိုကျဆိုငျတာတှေ၊ ဘုနဲ့ဘောကျဖွဈတာတှကေ သဘာဝပါပဲ။ ဆှမြေိုးသားခငျြးနဲ့တောငျ အဆငျမပွတေဲ့အခိုကျအတနျ့တှရှေိသေးတာ သှေးမတျောသားမစပျတဲ့ လူနှဈယောကျဆို ပွောဖှယျမရှိပေါ့။ ဒီလိုအခါမြိုးတှမှော ညှိနှိုငျးဖွရှေငျးတာသာ မလုပျမိရငျ အပကျြပကျြနဲ့ နှာခေါငျးသှေးထှကျရုံပဲ ရှိမယျယောငျးရယျ။ ခကျတာက သှေးပှကျပှကျဆူနတေဲ့အခြိနျဆို ဖွရှေငျးနညျးက အလှယျတကူခေါငျးထဲရောကျမလာတာပဲ။ ဒီတော့ လကျတှဲဖျောနဲ့ ပွဿနာအစပြိုးလာပွီဆိုရငျ …
ဟုတျပါတယျ ယောငျးရေ … အရငျဆုံး နှုတျဆိတျနလေိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဝစီဗဒေထိတိုငျးရှတဲ့။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခအြေတငျခှနျးကွီးခှနျးငယျပွောရငျ ပိုဆိုးရုံပဲရှိတာပါ။ စိတျဆိုးနတေဲ့အခြိနျ ကိုယျခဈြရတဲ့လကျတှဲဖျောကို လြှာစောငျးထကျထကျနဲ့ ပွောခဲ့သမြှတှကေ ယောငျးတို့အိမျထောငျရေးကို အထိခိုကျစဆေုံးမို့ ပွဿနာဖွဈရငျ စိတျအေးသှားတဲ့အခြိနျထိ နှုတျဆိတျပွီး ခဏရှောငျနလေိုကျပါ။
Stella တို့တှကေ ပွောဖို့ပဲအားသနျကွပွီး သူတဈပါးရဲ့ခံစားခကျြတှကေို နားထောငျပေးဖို့ မလြေ့ော့နတေဲ့အထိ အတ်တကွီးတတျကွတယျ။ ဒါတှကေပဲ အနားက တနျဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ လူတခြို့ကို ဆုံးရှုံးနစေရေတဲ့ အကွောငျးရငျးတှပေါ။ အလုအယကျပွောပွီး ကိုယျမှနျကွောငျးသကျသပွေဖို့ ကွိုးစားနမေယျ့အစား သူ့ဘကျကကော ဘာပွောစရာရှိလဲဆိုတာ နားထောငျပေးသငျ့ပါတယျ။
တဈအိုးတဈအိမျတညျထောငျပွီဆိုတာနဲ့ လူနှဈယောကျက တဈသှေးတညျးတဈသားတညျးဖွဈနပွေီလေ။ ဆိုးတူကောငျးဖကျ ဘာမဆိုမြှဝခေံစားဖို့ ကတိပွုခဲ့ပွီးပွီပဲ။ ဒါကွောငျ့ တဈဖကျသားမှာကော ဘယျလိုအခကျအခဲတှရှေိနလေဲ၊ နိစ်စဓူဝကိစ်စအထှထှေေ အဆငျပွရေဲ့လား ဆိုတာတှကေို မသိရငျတောငျ သိအောငျကွိုးစားပါ။
ဘုံရနျသူဆိုတာ တခွားမဟုတျဘူး။ ယောငျးတို့ဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာပါပဲ။ ပွဿနာကို အမွနျဆုံးဖွရှေငျးဖို့ မကွိုးစားဘဲ သူ့ထကျငါအနိုငျရရေး တို့အရေးဖွဈနရေငျတော့ အဆုံးသတျလှမယျ မထငျပါဘူး။
ယောငျးဘကျက မှနျရငျလညျး မှနျနနေိုငျတယျ။ အနိုငျရသူက ယောငျးဖွဈခငျြလညျးဖွဈမယျ။ ဒါပမေဲ့ အနိုငျရတော့ကော ဘာထူးလဲ ? အနာဂတျမှာလညျး ဒီလိုပွဿနာတှေ ဖွဈလာဦးမှာပဲ။ ခေါငျးထဲမှာ အနိုငျရဖို့ပဲ ရှိနမေယျဆိုရငျ အခြိနျယူတညျဆောကျထားရတဲ့ relationship တဈခုကို ဆုံးရှုံးလိုကျရဖို့ပဲ ရှိပါတယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျနားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးယူဖို့က သာယာတဲ့အိမျထောငျရေးအတှကျ သော့ခကျြပါပဲ။
ကဲ … ယောငျးရေ။ ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးလညျး လကျတှဲဖျောနဲ့ ပွဿနာတှေ ကွုံလာရငျ ဘယျလိုဖွရှေငျးသငျ့တယျဆိုတာ စဉျးစားလို့ရသှားလောကျပါပွီ။ ခဈြတဲ့သူအားလုံး လကျတှဲညီညီ ဘဝခရီးကို လြှောကျလှမျးနိုငျပါစနေျော။
Tags: Couple, lifestyle, love, love life, marriage, Relationship, tips